စက္ကဝါက် - ဝီကီပီးဒီးယား
(စက္ကဝက်ငှက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
စက္ကဝါက် "(Annas tadorna)"
စက္ကဝါက် (အင်္ဂလိပ်: Shelduck) သည် ဟင်္သာမျိုးနွယ်ဝင် (ဘဲ)ငှက်များအားလုံးကို ခြုံငုံ၍ သုံးနှုန်းသော အမည်နာမဖြစ်သည်။ ပါဏဗေဒအလိုအရ အန်နာတီဒီး (Anatidae) မျိုးရင်း၊ တဒ္ဒေါနီနီး (Tadorninae) မျိုးရင်းခွဲမှ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မျိုးရင်းတူ (ဘဲ)ငှက်များအစုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မျိုးစုဝင် ငှက်အများစုသည် ကြီးမားသော ဘဲနှင့် ဘဲငန်း ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိကာ ဟင်္သာ၊ တောဘဲနှင့် အလားတူငှက်များ မျိုးစဉ်- "အန်စာရီဖောမီး (Anseriformes)" အတွင်း ပါဝင်ကြသည်။
စက္ကဝါက် ဟူသည့် ဝေါဟာရသည် ပါဠိစကား "စက္ကဝါက"မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တောင်ပေါက်ဓာန်တွင် "၎င်းစက္ကဝါက်ငှက် ဟူသည် မြစ်နား၊ ကမ်းနား၌ အဖိုအမနှစ်ကောင်တွဲ၍ နေတတ်သော....ငှက်မျိုးပင်တည်း" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယင်း တောင်ပေါက်ဓာန် အနက်ဖွင့်ဆိုမှုအပေါ် မှီငြမ်း၍လည်း မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ၌ "အဖိုအမနှစ်ကောင်တွဲ၍နေတတ်သော ရေဘဲတစ်မျိုး" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကြောင်းတူသံကွဲဖော်ပြချက်တွင် "ဟင်္သာ" ဟူ၍လည်းကောင်း အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် ပါဏဗေဒအလိုအရ ၎င်းမျိုးတူငှက်အားလုံးသည်"Tardona" ဟူသော မျိုးစုထဲတွင်ပါဝင်ကြသောကြောင့် စက္ကဝါက် သည် ယင်းငှက်များအားလုံးကို ခေါ်ဆိုနိုင်သော အမည်ဖြစ်သည်။
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် စက္ကဝါက် ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
ပါဝင်သော မျိုးစိတ်များ စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါဇယားသည် HBW နှင့် BirdLife International Illustrated Illustrated Checklist of the Birds of the World မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
T. tadorna စက္ကဝါက်ဟု
T. ferruginea ဟင်္သာ ဥရောပ၊
T. cana တောင်အာဖရိက
T. tadornoides ဩစတြေးလျ
T. variegata သုခဘုံ
စက္ကဝါက် နယူးဇီလန် အန္တရာယ်မကျ
T. cristata မောက်တင်
↑ သစ်တောဦးစီးဌာန (၄ မတ် ၂၀၂၀)။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆၉၀/၂၀၂၀) (PDF) (in မြန်မာဘာသာ) စာ-၅။ သစ်တောဦးစီးဌာန။ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း”
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ဝစ်ရှင်နရီ ပံ့ပိုးရေးသားသူများ (၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၆)။ စက္ကဝါက် (in မြန်မာဘာသာ)။ ဝစ်ရှင်နရီ။ ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Del Hoyo၊ J.; Collar၊ N. J. (2014)။ HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World I: Non-passerines။ Lynx Edicions။ pp. 134–135။ ISBN 978-8496553941။
↑ HBW နှင့် BirdLife တို့၏ မျိုးရိုးခွဲခြားမှုပညာရပ်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုစာရင်း မူကွဲအမှတ်(၅)။ BirdLife International (၂၀၂၀)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စက္ကဝါက်&oldid=718712" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။